Lombhede iphupho ekhishini kwabaningi. Lwenza induduzo eyengeziwe. Ukuze ezinye kungase kubonakale kuxaka ngenxa yobukhulu umxhwele, ngoba akubona bonke abangabohlobo abanikazi emakhishini ezinkulu. Kodwa ngisho ekamelweni elincane, ungafaka usofa encane. Kungaba isifiso ...
Indlela ukukhetha usofa ekhishini
Lapho uthenga ifenisha abantu, ikakhulukazi cabanga amapharamitha amabili: intengo futhi ukubukeka. Kodwa ukuze into labawatfolile esifundvweni nobe ekupheleni akazange ukudanisa, kumelwe sicabangele ukukhetha ngokucophelela. Nquma ukuthi yini inhloso usofa uzobe elise ekhishini ukunikeza izihlalo ezengeziwe noma ilele endaweni. Nakani design nombala kusofa. Kufanele sihlanganise ngokuvumelanayo ne angaphakathi ekhishini.
ukukala ngokucophelela ekamelweni bese ubala ukuthi wawungakanani ifenisha esizayo. Okuhle ukubeka amancane, wenza ngemibala egqamile, ukhukho ewumngcingo eya ekhishini yobukhulu nesizotha. Uma indawo egumbini ivumela, ungakhetha ifenisha ukhululekile kakhulu kwanoma iyiphi umthunzi.
Ungakhohlwa ukuthi usofa kufanele kube ntofontofo. Ngaphambi kokuba uthenge, ahlale, ulale kuyo. Ungathathi creaking ifenisha, kokuba iphunga angaphandle okubi, noma lowo has umuzwa ezinhle entwasahlobo. Hlola indlela sakhiwo - ke akufanele kube nzima. Ungakhohlwa mayelana Ukukhweza - kumele babe eqinile futhi ngokuphephile ukuxhuma izingcezu ifenisha.
Namuhla, abakhiqizi zinikeza ezihlukahlukene elikhulu onobuhle SOFAS. Thola ifenisha kwesokudla kungaba yonke ukunambitheka kanye nesabelomali.
Small ekhoneni usofa ekhishini
Uma etafuleni uya khona emkhayeni omkhulu noma izimenywa njalo ukuza, khona-ke kukho okuhle ngokuba ekhishini. Ngaphansi esihlalweni ezibekwe niche lapho ungasusa izinto. Ungathola usofa ekhoneni ekhishini, okuyinto abethela emashalofini uhlangothi, esiza nasekuhlanzeni akhulule isikhala. Kukhona onobuhle lapho backrest unamathele odongeni. Okuwukuphela abalulekile ethile ekhoneni usofa - isihlalo emincane. Kodwa uma ekhishini ezinkulu, ungakhetha ifenisha ukhululekile kakhulu.
Lokhu kukhetha kubaluleke abanikazi amafulethi elilodwa elalingaphandle. Ngo ikhishi elincane ungafaka usofa olulodwa. Kungaba kahle ihlanganise oyedwa. Uma usayizi ikamelo ivumela, kungenzeka ukubona kweminye imihlobo. ikhishi Amasofa nge indawo ingalali abantu ababili noma iloli bavunyelwa ukuba bahlale endaweni ababezolala kuyo ebusuku ngaphezulu abantu. Ungakhohlwa Into esemqoka - ifenisha kungahlali ukulala kuyo njalo.
Sofa ebhentshini, usofa usofa, mini-usofa
Lokhu usofa awunankinga yokwenze emakhishini ezincane. Anakho esihlalweni elithambile, kukhona ngaphansi okuyinto niche ekhethekile yokugcina. It wenziwa ngemibala egqamile. Usofa ekhishini in isitayela zakudala, ezweni noma Provence ukulingana kahle.
Londoloza kancane isikhala kuzosiza ifenisha ngaphandle backrest futhi yokubeka. Ukhukho usofa zizongena abantu 2-3. He is kunalokho ewumngcingo, ngaphandle niches yokugcina, kodwa kungenzeka yokulala. Ngenxa elele phezu kombhede akusilo ukhululekile kakhulu, uma kuqhathaniswa nge embhedeni ogcwele, ifenisha ngeke sisetshenziswe njengoba embhedeni unomphela, futhi ngenxa yalokho isikhathi eside.
Uma ufuna ukudala induduzo kakhudlwana futhi lula e ikhishi elincane, isibonelo, Khrushchev, kuyafaneleka ukunaka mini-usofa. Yena kahle elitholakala eduze kwefasitela, futhi ngeke kube niche kakhulu yokugcina ikhishi izinto.
Indaba best for ifreyimu - izinkuni zemvelo. Oak kanye beech ziqine futhi iqine, kodwa ifenisha senziwa lezi zinhlobo zezindwangu kuyoba ezibizayo. Pine kanye birch ziphansi ngekhwalithi, kodwa abiza kancane. Lolu khuni ziphathwe impregnations okuyisipesheli ukwandisa ukumelana umswakama. Ungathenga usofa encane ekhishini nge Uhlaka aluminium. Kuyoba isikhathi eside ngokwanele. Labo abafuna imali, kuwufanele ifenisha ukubukeka nge Uhlaka eyenziwe chipboard. Kuyinto ishibhile kuka izinkuni zemvelo, kodwa futhi uyokhonza kungekho eminyakeni engaphezu kuka-5.
Iningi esisebenzayo usofa Upholstery kuyinto lesikhumba. Njengoba kulula ukususa uthuli ukungcola, ochithekile ketshezi. Indaba ine amandla nokuqina kwayo. Ungakwazi sinake lesikhumba. It has zonke izimfanelo esikhumbeni, futhi kuyoba eside, kodwa kuphela ngaphansi kombandela wokuthi akhethiwe izinga okusezingeni impahla.
Uma emaqaqasini ekhishini usofa ezifanelekayo, upholstered ngendwangu, kukhona futhi udinga ukusebenzisa izindwangu esisebenzayo. Jacquard - material okuhlala kakhulu. Kuyoqhubeka isikhathi eside nje ngokunakekela kahle. Zithuthelekela suit ikati abanikazi. Izilwane ezifuywayo ngeke engaloli izimpiko kuso. impahla okuqinile, ayikwazi ukudonsa umswakama. Kubonakala sengathi kufana Suede. Chenille okuhlala isikhathi eside, hypoallergenic, kodwa akanayo ukumelana umswakama.
Ungabeki embhedeni eduze kwesitofu ngekhwitjhini, noma eduze ibhethri. Lokhu kuyadingeka by imishini ukuphepha umlilo, njengoba ungakwazi ngephutha bashe. Ngaphezu ifenisha uyohlale uthole udaka amafutha. Uma ebusweni kuyodingeka ukuba wageza njalo, lo Plating niyogqokani ngokushesha.
Ngisho noma i- le Upholstery we usofa esetshenziswa umswakama impahla ukumelana lokho akudingeki ukuba uhlole amandla akhe futhi waphinda uthele noma yiluphi uketshezi.
Lapho ukuhlanza ifenisha kumele kusetshenziswe eziklanyelwe lesi sakhiwo. Hlola ukuthi ukwakheka yabo yayingaxhomekile bleach.
Sebenzisela wokuhlanza kusofa cleaner wezindlu noma generator umusi.
Lapho lantambama amabala, uthele ithuluzi ekhethekile ayikho Upholstery futhi indwangu ethambile futhi Sula ubuso bayo.
Ukususa ukungcola kusukela nesembozo, sebenzisa ezomile yokuhlanza amasevisi.
Zama ukubeka usofa ekhishini ngakho ukuthi akukhona elangeni ngqo. Ifenisha kanye Upholstery kancane wokushiswa ubukeka ngempela lemukelekako.
Yenza ekhishini ngaphezulu ukhululekile lula. Kwanele ukuthola umbala kwesokudla, ukwenza ngokuphelele zisebenzisa isikhala esitholakalayo, engeza nice izinto kancane nezinye izinsimbi. Ngokumbeka usofa encane ekhishini, ungakwazi ukudlulisa ukusebenza yayo: Thola ikesi yokugcina, i Embhedeni owenezelwe noma zihlalo. Lokhu ifenisha uyonika induduzo eyengeziwe.
Cherry-Oxford: umbala ingaphakathi
"Beeline" -Internet uzulazula eRussia nakwamanye amazwe. Indlela ukuxhuma kwi-Inthanethi e uzulazula "Beeline"?
Isabel Macedo. Ukuphila nokusebenza
Maritim Jolie Peninsula Ville Royal Resort 5 * (Egypt / Sharm El Sheikh) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa